Football Khabar » ग्रानाडालाई घरमा मुस्किलले जित्दा बार्सिलोनाका नाममा रेकर्ड !
ग्रानाडालाई घरमा मुस्किलले जित्दा बार्सिलोनाका नाममा रेकर्ड !
अघिल्लो दिन स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा बार्सिलोनाले ग्रानाडासँग आफ्नो घरमा खेल्यो । नयाँ प्रशिक्षक क्विके सेटिनको डेब्यु खेलमा बार्सिलोनाले पाहुना टोली ग्रानाडालाई १–० ले निकै कठिन गरी हरायो । आफ्नो घरमा बार्सिलोनालाई खेल जित्न खेलको ७६औं मिनेटमा कप्तान लिओनल मेस्सीले गरेको १ मात्रै गोल निर्णायक बन्यो ।
आफ्नो घरमा कठिन अवस्थाबाट खेल जितेको बार्सिलोनाले ७ वर्षपछि नयाँ रेकर्ड पनि बनायो । उसले ग्रनाडाविरुद्ध एकै खलमा १ हजार पास पूरा गरेर नयाँ रेकर्ड बनाएको हो । र, ला लिगामा यस्तो ७ वर्षपछि पहिलोपटक भएको हो ।
यसअघि बार्सिलोनाले नै सन् २०१२ को नोभेम्बरमा ला लिगामै लेभान्टेविरुद्धको खेलमा १ हजारभन्दा बढी पास पूरा गरेको थियो । सो खेल बार्सिलोनाले ४–० ले जितेको थियो । सो खेलमा बार्सिलोनाका लागि लिओनल मेस्सीले २ गोल गर्दा आन्द्रेस इनिएस्टा र फाब्रीगासले १–१ गोल गरेका थिए ।
यता, ला लिगामा सिजन २००५–०६ यता कुनै पनि टिमले बार्सिलोनाबाहेक १ हजार पटक पास पूरा गरेका छैनन् । तर, बार्सिलोनाले दुईपटक १ हजार पास पूरा गरेको छ ।
ग्रानाडाविरुद्ध बार्सिलोनाको स्टाटस :
कूल सट – १८
अन टार्गेट – ६
बल नियन्त्रण – ८३ प्रतिशत
कूल पास – १००२
पास एक्युरिसी – ९१ प्रतिशत
प्रकाशित मिति ७ माघ २०७६, मंगलवार २१:२६